Gott, der Vater , Weltweite Kirche Gottes Schweiz (WKG)
Gott, der Vater, ist die erste Person der Gottheit, der Ursprungslose, von dem der Sohn vor ewiger Zeit gezeugt ist und von dem der Heilige Geist ewig ausgeht durch den Sohn. Der Vater, der alles Sichtbare und Unsichtbare durch den Sohn geschaffen hat, sendet den Sohn aus, damit wir das Heil erlangen, und schenkt den Heiligen Geist zu unserer Erneuerung und Annahme als Kinder Gottes. (Johannes 1,1.14, 18; Römer 15,6; Kolosser 1,15-16; Johannes 3,16; 14,26; 15,26; Römer 8,14-17; Apostelgeschichte 17,28)
Für uns als Christen ist der elementarste Glaubenssatz der, dass Gott existiert. Unter „Gott“ – ohne Artikel, ohne näheren Zusatz – verstehen wir den Gott der Bibel: ein gutes und mächtiges Geistwesen, das alle Dinge geschaffen hat, dem an uns gelegen ist, dem an unserem Tun gelegen ist, das an und in unserem Leben handelt und uns eine Ewigkeit mit seiner Güte anbietet.
In seiner Totalität ist Gott vom Menschen nicht verstehbar. Aber wir können einen Anfang machen: Wir können Bausteine an Gottwissen zusammentragen, die uns die Grundzüge seines Bildes erkennen lassen und uns einen ersten guten Erkenntnisansatz dafür geben, wer Gott ist und was er in unserem Leben tut. Richten wir den Blick auf die Eigenschaften Gottes, die zum Beispiel ein neuer Gläubiger als besonders hilfreich empfinden mag.
Dad badan - xitaa kuwa rumaystayaasha wakhti dheer - waxay raadsadaan caddeyn jiritaanka Ilaah. Ma jiro wax daliil ah oo Eebbe ka raalli yahay qof walba. Waxay u badan tahay inay kafiican tahay kahadalka caddaynta ama tilmaamaha halkii aad caddayn ka noqon lahayd. Caddayntu waxay ina siineysaa hubaal in Eebbe jiro iyo in dabeecadiisu u dhigantahay waxa Kitaabka Quduuska ahi ka leeyahay isaga. Ilaah “iskutallaabta kuma daadin”, Bawlos wuxuu ku dhawaaqay dadka aan Yuhuudda ahayn ee jooga Lustra (Falimaha 14,17:XNUMX). Is-marqaatiga - waa maxay?
abuuridda Psalm 19,1 konstatiert: „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes ...“ In Römer 1,20 heisst es:
Sababta oo ah muuqaalka aan la arki karin ee Ilaah, kaas oo ah awoodiisa daa'imka ah iyo ilaahnimadiisa, ayaa laga dhex arkay shuqulladiisii ​​tan iyo abuurniinta dunida ... "Abuurku laftiisu wax buu Ilaahay ka sheegayaa.
Sababaha sababaha ayaa sheegaya in wax loo sameeyay Earth, Sun iyo Xiddigaha si ula kac ah sida ay yihiin. Marka loo eego cilmiga, cosmosku wuxuu ku bilaabmay cirfiid weyn; Sababaha sababa la aaminsanahay in wax sababaan In wax uun - aannu aaminsanahay - wuxuu ahaa Ilaah.
Qorshaha Abuurintu waxay muujisaa calaamadaha kala dambeynta, shuruucda jireed. Haddii qaar ka mid ah waxyaabaha aasaasiga u ah arrinta ay waxyar ka kala duwan yihiin, haddii uusan dhulku jiri lahayn, aadanuhu ma jiri karaan. Haddii dhulku leeyahay cabbir kaladuwan ama wareeg kale, shuruudaha meeraheena ma oggolaaneyn karaan nolosha aadanaha. Qaarkood waxay u tixgeliyaan tan inay tahay isku imaatinka astaamaha; qaar kalena waxay u arkaan inay caqli gal tahay in la macneeyo in nidaamka qoraxda uu qorsheeyay hal abuur caqli leh.
Leben beruht auf unglaublich komplexen chemischen Grundstoffen und Reaktionen. Manche halten das Leben für „intelligent verursacht“; andere halten es für ein Zufallsprodukt. Manche glauben daran, dass die Wissenschaft irgendwann einen Ursprung des Lebens „ohne Gott“ beweisen wird. Für viele Menschen aber ist die Existenz von Leben Indiz für einen Schöpfergott.
Der Mensch besitzt Selbstreflexion. Er erforscht das Universum, denkt über den Sinn des Lebens nach, ist allgemein der Sinnsuche fähig. Körperlicher Hunger lässt auf die Existenz von Nahrung schliessen; Durst lässt darauf schliessen, dass irgendetwas vorhanden ist, das diesen Durst zu stillen vermag. Lässt unsere geistige Sinnsehnsucht darauf schliessen, dass tatsächlich Sinn vorhanden ist und sich finden lässt? Viele Menschen behaupten, in der Gottbeziehung Sinn gefunden zu haben.
Moral [Ethik] Sax iyo khalad ma yahay arin fikradeed ama su'aal ah aragtida aqlabiyadda, mise waxaa jira amar ka sarreeya aadanaha oo tixgeliya wanaagga iyo xumaanta? Haddii uusan jirin Ilaah, markaa bani’aadamku aasaas uma laha inuu ugu yeero wax shar ah, ma jiro sabab lagu cambaareeyo cunsuriyadda, xasuuq, jirdil iyo xasuuq la mid ah. Jiritaanka shar waa sidaas darteed waxay daliil u tahay inuu jiro Ilaah. Haddii aysan jirin, xoog saafi ah waa inuu xukumaa. Sababaha sababihi waxay u hadlayaan rumaynta Ilaah.
Noocee ah Ilaah waa? Ka weyn sidii aan qiyaasi karno! Haddii isagu abuuray caalamka, wuu ka weyn yahay caalamka - oo aan lagu xaddidneyn xaddidaadda waqtiga, booska iyo tamarta, maxaa yeelay wuxuu jiray kahor waqtiga, meesha, arrinta iyo tamarta intaysan jirin.
2 Timoteyos 1,9: XNUMX wuxuu ka hadlayaa wax Ilaah “hore u qabtay”. Waqtigu wuu bilaabmay, oo Ilaah hortiis buu jiray. Waxay leedahay jiritaan aan wakhti lahayn oo aan lagu qiyaasi karin sanado. Waa weligiis, da 'aan xad lahayn - iyo xaddidnaan la'aan iyo dhowr bilyan oo aan weli waarayn. Xisaabteenu waxay gaaraan xadkooda haddii ay rabaan inay sharxaan jiritaanka Ilaah.
Tan iyo markii Eebbe abuuray arrinta, wuxuu jiray ka hor sheygan mana aha sheyga laftiisa. Waa ruux - laakiin ma "ka samaysan" ruux. Eebbe laguma abuuro haba yaraatee; way fududahay oo waxay u jirtaa ruux ahaan. Wuxuu qeexayaa ahaanshaha, wuxuu qeexaa ruuxa wuuna qeexaa arrinta.
Jiritaanka Eebbe wuu ka sarreeyaa arrinta isla markaana cabirrada iyo sifooyinka arrintu isaga isaga isaga ma khuseeyaan. Laguma cabbiri karo mayl iyo kiiloomitir. Sulaymaan wuxuu qirey in xitaa samooyinka ugu sarreeya aysan garan karin Ilaah (1Ki 8,27:23,24). Wuxuu buuxiyaa cirka iyo dhulka (Jer XNUMX:XNUMX); waa meelwalba, waa meelwalba. Meel kufiican oo kaamil ah oo aysan jirin majirto.
Ilaa intee ayuu Ilaah awood badan yahay? Haddii uu kicin karayo weyn, naqshadeyn karo nidaamyada qoraxda ee abuuri kara koodhadhka DNA, haddii uu "karti u leeyahay" dhammaan heerarkan awoodda, markaa rabshadiisu waa inay runtii noqotaa mid aan xad lahayn, markaa waa inuu ahaado mid awood leh. "Maxaa yeelay wax aan Ilaah suurtoobaynin ma jiro", Lukos 1,37 ayaa inoo sheegay. Ilaah wuu samayn karaa wax kasta oo uu doonayo.
Hal-abuurka Eebbe wuxuu ku muujiyaa caqli ka sarreeya caqligeenna. Isaga ayaa maamuli kara adduunka oo xaqiijinaya jiritaankiisa sii socda ilbiriqsi kasta (Cibraan 1,3). Taasi micnaheedu waa inuu ogaadaa waxa ka dhacaya adduunka oo dhan; caqligiisu waa mid aan xad lahayn - waa nin wax walba wax og. Wax kasta oo uu doonayo inuu garto, garto, waaya-aragnimo, ogaado, garto, wuxuu la kulmaa.
Maadaama Eebbe qeexayo waxa saxda ah iyo waxa khaldan, isagu xaq buu leeyahay oo wuxuu leeyahay awood uu had iyo jeer ku saxaro. "Maxaa yeelay Ilaah looma tijaabin karin inuu shar sameeyo" (Jak 1,13:11,7). Waxay ku jirtaa natiijada ugu sareysa oo gebi ahaanba waa (Sabuurka XNUMX). Heerarkiisu waa sax, go'aannadiisu way sax yihiin, oo isagu adduunka ayuu ugu xukumaa si caddaalad ah maxaa yeelay asal ahaan isagu waa wanaagsan yahay oo waa xaq.
Dhinacyadan oo dhan, Eebbe aad buu innaga duwan yahay annaga oo leh ereyo gaar ah oo aan u adeegsan karno oo keliya xagga Ilaah. Kaliya Ilaah waa wax walba wax garanaya, oo meel walba jooga, wax walba leh, weligiisna jira. Waxaan nahay arrinta; isagu waa ruux. Waxaan nahay dad dhimanaya; isagu waa mid aan dhiman karin. Waxaan ugu yeernaa kala duwanaanshaha nooca u dhexeeya annaga iyo Ilaah, farqiga u dhexeeya, soo-galkiisa. Isagu wuu "naga gudbaa", taas oo ah, wuu inaga sii gudbaa, isagu ma ahan sida annaga.
Dhaqamada kale ee qadiimiga ah waxay rumeysan yihiin ilaahyo iyo ilaahyo kuwaasoo midba midka kale u dagaallama, oo si iskiis ah u dhaqma, oo aan la aamini karin. Kitaabka Quduuska ah, dhinaca kale, wuxuu shaaca ka qaadayaa Eebbe oo leh awood buuxda, oo aan waxna uga baahnayn qofna, oo markaa wax uun u qabta inuu caawiyo kuwa kale. Gabi ahaanba waa xasilloon yahay, dhaqankiisu waa xaq oo waa aamin. Tani waa macnaha Kitaabka Quduuska ahi marka uu Ilaah ugu yeerayo "Quduus": akhlaaq ahaan qumman.
Taasi waxay nolosha ka dhigeysaa mid aad u fudud. Ma aha inaad isku daydo inaad ka farxiso toban ama labaatan ilaah oo kaladuwan; mid baa jira. Abuuraha wax walba wali isagaa xukuma wax walba wuuna xukumi doonaa dadka oo dhan. Waxyaabahayagii hore, mustaqbalkeenna iyo mustaqbalkeenna dhammaantood waxaa go'aaminaya hal ilaahay, oo caqli badan, oo xoog badan, oo weligiis jira.
Haddii aan ogaannay oo keliya Ilaah inuu isagu leeyahay awood aan xad lahayn oo uu nagu leeyahay, waxaan u maleyneynaa inaan addeecno cabsi darteed, anagoo jilbaha isku qabsanna oo qalbi jabsan. Laakiin Ilaahay wuxuu noo muujiyay dhinac kale oo dabeecadiisa ah: Ilaaha weyn ee cajiibka ah sidoo kale waa mid aad u naxariis badan oo wanaagsan.
Qof xer ah ayaa Ciise weydiiyay: "Sayidow, Aabbaha na tus ..." (Yoxanaa 14,8: 2). Wuxuu doonayay inuu ogaado waxa Ilaah yahay. Wuxuu ogaa sheekooyinka duurka gubanaya, tiirkii dabka iyo daruurkii Siinay, carshigii aan iin karin ee uu Yexesqeel arkay, iyo Eliyaas uu maqlay (Ex.3,4; 13,21; 1 Boqoradii 19,12; Yexes 1). Ilaah wuu ka dhex muuqan karaa waxyaalahaas oo dhan, laakiin isagu muxuu runtii isagu yahay? Sideen u qiyaasi karnaa isaga?
"Qofkii i arka wuxuu arkaa Aabbaha," ayuu yiri Ciise (Yoh 14,9: XNUMX). Haddii aan rabno inaan ogaano sida Ilaah yahay, waa inaan eegnaa Ciise. Waxaan ku baran karnaa aqoonta Eebbe dabiicadda; aqoon dheeraad ah oo Ilaah ka ah sida ay u muujiso lafteeda Axdiga Hore; inta badan aqoonta Ilaah, si kastaba ha noqotee, sida uu isagu isu muujiyay Ciise.
Ciise wuxuu ina tusayaa dhinacyada ugu muhiimsan dabeecadda Eebbe. Isagu waa Imaaniin, oo macnaheedu yahay "Ilaah inala jiro" (Mt 1,23:XNUMX). Wuxuu ku noolaa dembi la'aan, oo aan ikhtiyaar lahayn. Naxdin baa ku dhacday isaga. Wuxuu dareemaa jacayl iyo farxad, rajo xumo iyo xanaaq. Wuxuu daneeyaa shaqsiga. Isagu xaqnimo buu weyddiistaa, dembigana wuu cafiyaa. Wuxuu u adeegay kuwa kale, ooy kujiraan silica iyo dhimashada.
Taasi waa Ilaah. Horay ayuu isagu naftiisa ugu sharaxay Muuse sida soo socota: "Sayidow, Ilaahow, Ilaahow, naxariis iyo roonaan iyo samir iyo naxariis badan iyo aaminnimo, oo dhawr kun oo naxariis leh, oo dhaafa xumaanta, xadgudubka iyo dembiga, laakiin qofna kama tagto ciqaab la'aan ..." (Baxniintii 2, 34-6).
Ilaaha ka sarreeya abuurista sidoo kale wuxuu xor u yahay inuu ku dhex shaqeeyo abuuritaanka. Tani waa imaatinkiisii, inuu nala joogo. In kasta oo uu ka weyn yahay caalamka oo uu ku yaal meel kastoo dunida ka jirta, waa “inala jirtaa” qaab ay u la jirto "gaalada". Ilaaha xoogga badan had iyo goor waa inoo dhow yahay. Isagu waa dhow yahay waana fog yahay isla waqtigaas (Jer 23,23:XNUMX).
Ciise wuxuu galay taariikhda aadanaha, booska iyo waqtiga. Isagu waa bini-aadam, wuxuu na tusay nolosha jidhku ku habboon yahay inay ahaato, wuxuuna ina tusiyaa in Ilaah doonayo inuu kor u qaado nolosheena jidhka. Nolosha daa'imka ah ayaa nala siiyaa, nolosha ka baxsan xadka jirka ee aan hadda ognahay. Nolosha ruuxa ayaa naloogu deeqayaa: Ruuxa Ilaah ayaa inagu soo gala, wuu inagu dhex jiraa oo wuxuu inaga dhigaa carruurta Ilaah (Rooma 8,11:1; 3,2 Yooxanaa XNUMX). Ilaahay had iyo jeer wuu inala jiraa, isagoo ka shaqeynaya meel bannaan iyo waqti inuu na caawiyo.
Ilaaha weyn oo xoogga badanuna waa Ilaah jecel oo naxariis badan; Garsooraha saxda ah ee cadaaladdu waa isla waqtiga badbaadiyaha iyo badbaadiyaha badbaadiyaha. Ilaaha dembiga carooday wuxuu sidoo kale badbaadiyaa dembiga. Isagu waa nimco miidhan, oo naxariis buu leeyahay. Tani kama duwana xayawaan abuuri kara koodhyada DNA-da, midabada qaansoroobaad, hoos u dhaca ubax doogga. Haddii aanu Eebbe naxariis iyo jacayl lahayn, weligayo ma jiri karno.
Ilaah wuxuu ku sifeynayaa xiriirkiisa annaga oo adeegsaneyna muuqaalo luqadeed oo kala duwan. Tusaale ahaan, inuu isagu yahay aabbaha, innaguna waxaan nahay carruurta; isagu ninka iyo innaga, si wadajir ah, afadiisa; isagu waa boqorka iyo annaga mawaadiicdiisa; isagu waa adhijirka iyo annaga. Waxa sawiradan luqadaha ah ku wada nool yihiin waa in Ilaah isu muujiyo inuu yahay qof xilkas ah oo ilaalinaaya dadkiisa oo fuliya baahidiisa.
Ilaahay wuu ogyahay sida aan u yar nahay. Wuxuu ogyahay inuu noo cidhibtirayo daboolka faraha, oo uu yaraado khaldanaanta ciidamada cosmic. Ciise dhexdeeda, si kastaba ha noqotee, Ilaah wuxuu na tusayaa sida uu noo jecel yahay iyo sida uu innaga u daneeyo. Ciise wuu is-hoosaysiiyay inuu xitaa silco haddii ay na caawiso. Wuu ogyahay xanuunka aan ku jirno maxaa yeelay isaga laftiisuu xanuunsaday. Wuxuu ogyahay murugada ay belaayadu keento oo uu isagu qaatay naftiisa, isagoo na tusinaya inaan Ilaah aaminin karno.
Ilaah qorshooyin ayuu inoo leeyahay maxaa yeelay isagu wuxuu magaciisa ku abuuray abuurkiisa (Bilowgii 1:1,27). Wuxuu inaga codsanayaa inaan is waafajinno isaga - naxariis, ma aha awood. Ciise Masiix wuxuu ina siinayaa tusaale aan ku dayno oo aan ku dayan karno: tusaale is-hoosaysiin, is-adeegsi la’aan, jacayl iyo naxariis, iimaan iyo rajo.
Yooxanaa (1 Yooxanaa 4,8: XNUMX) ayaa yidhi: "Ilaah waa jacayl" Wuxuu ina tusay jacaylkiisa uu inoo qabo isaga oo u diraya ciise inuu u dhinto dembiyadeenna, si caqabadaha innaga dhexeeya iyo ilaahay u dhacaan oo ugu dambaynti aynu ula noolaan karno farxad weligeed ah. Jacaylka Eebbe ma aha fikir rajo - waa camal inaga caawisa baahiyaheena qotada dheer.
Waxaan waxbadan ka baranaa Ilaah oo iskutallaabta lagu qodbay ee Ciise ka badan sarakiciddiisa. Ciise wuxuu ina tusayaa in Ilaah diyaar u yahay xanuun, xitaa xanuunka ay sabab u yihiin dadka uu caawiyo. Jacaylkiisa ayaa wacaya, dhiirigelinaya. Isagu naguma qasbo inaan yeelno doonistiisa.
Jacaylka Ilaah noo qabo, oo si cad loogu muujiyay Ciise Masiix, waa tusaalahayaga: “Kan jacaylku waa kan: ee ma aha inaannu Ilaah jeclayn, laakiin isagaa ina jeclaaday oo wiilkiisii ​​ayuu u soo diray inuu heshiisiyo dembiyadeenna. Gacaliyayaalow, haddii Ilaah sidaa inoo jeclaaday, waa inaannu isjeclaanno ”(1Joh 4, 10-11). Haddaanu ku nool nahay jacayl, nolosha weligeed ah waxay noqon doontaa farxad, annaga oo keliya uma aha laakiin sidoo kale kuwa nagu wareegsan.
Haddaan Ciise ku raacno nolosha, annaguna waannu ku raaci doonnaa dhimashada iyo ka dib sarakicidda. Isla Ilaaha ah kii Ciise kuwii dhintay ka soo sara kiciyey isagaa na sara kici doona oo na siin doona nolosha weligeed ah (Rooma 8,11:XNUMX). Laakiin hadaan baran barashada jeclaanta, ku raaxeysan mayno nolosha weligeed ah. Taasina waa sababta uu Eebbe ina baray jacaylka, xawaaraha aan ku sii wadi karno, iyada oo loo maro tusaale wanaagsan oo isagu horteenna ku jira, oo qalbiyadeenna uga beddela Ruuxa Quduuska ah ee inaga dhex shaqeeya. Awoodda xakameysa quwadaha nukliyeerka ee qorraxda waxay si kalgacal leh ugu shaqeeyaan qalbiyadeenna, weyna noo qabanayaan, waxay ku guuleystaan ​​kalgaceylkeena, waxay guuleystaan ​​daacadnimadeena.
Ilaah wuxuu ina siinayaa macnaha nolosha, hanuuninta nolosha, rajo nolosha weligeed ah. Waan ku kalsoonaan karnaa, xitaa haddii aan u xanuunsanno wanaag wanaag. Awoodiisa ayaa ka dambeysa wanaagga Eebbe; Jacaylkiisuna wuxuu ku hanuuniyaa xigmaddiisa. Awoodaha adduunka oo dhami waxay ku jiraan amarkiisa wuuna u adeegaa sida ugu wanaagsan. Laakiin waxaan ognahay in kuwa Ilaah jecel, wax waliba inay u adeegaan waxa ugu wanaagsan ... ”(Rom 8,28:XNUMX).
Sideen uga jawaabnaa Ilaahey, weyne iyo naxariis badan, oo cabsi badan oo naxariis badan? Waxaan kaga jawaab celineynaa cibaado: maamuustiisa sharaftiisa, mahadnaqiddiisa, howlihiisa qaddarintiisa, xushmaynta xooggiisa, ka qoomamaynta kaamilnimadiisa, u hoggaansanaanta awoodda aan ka helno runtiisa iyo xigmaddiisa.
Auf seine Barmherzigkeit antworten wir mit Dankbarkeit; auf seine Gnade mit Loyalität; auf seine Güte mit unserer Liebe. Wir bewundern ihn, wir verehren ihn, wir geben uns ihm mit dem Wunsch hin, dass wir noch mehr zu geben hätten. So wie er uns seine Liebe gezeigt hat, lassen wir uns verändern durch ihn, damit wir die Menschen lieben, die um uns sind. Wir setzen alles ein, was wir haben, alles, was wir sind, alles, was er uns schenkt, um anderen zu dienen, indem wir Jesu Beispiel folgen.
Kan waa Ilaaha aan u barinno, isagoo garanaya inuu maqlo eray kasta, inuu yaqaan fikir kasta, inuu garanayo waxaan u baahanahay, inuu danaynayo dareenkeena, inuu doonayo inuu weligiis nala noolaado, Wuxuu leeyahay awood uu na siinayo waxkasta oo rabitaan ah iyo xigmad aan la sameyn karin. Ciise Masiix, Ilaah wuxuu caddeeyay inuu aamin yahay. Eebbe wuu u jiraa inuu u adeego, ee ma aha inuu yahay mid iskiis ah. Awoodiisa ayaa had iyo jeer loo adeegsadaa jacayl. Ilaaheenna waa kan xoogga ugu sarreeya, uguna sarreeya jacaylka. Waxaan si buuxda ugu aamini karnaa wax walba.